Soomaaliya iyo Mustaqbalka Dhaw
Dhawr bilood ka dib markii ay burburtay Soomaaliya 1991ki ayaan wareystay Prof.Siciid Samatar ee Jaamacadda Rutgers (USA) sida uu u arko mustaqbalka Soomaaliya. Waxay ula muuqatay in Soomaalidu ay ku midoobi karto laba isir: diinta Islaamka iyo qabiilka. Wuxuu raaciyay in Soomaalidu ay u iilayaan isirka qabiilka. Kuma uusan darin “wadaninnimo” isirrada mideeya Soomaalida waqtigaas. Saddex iyo toban sano iyo dhawr iyo toban shir ka dib, Soomaaliya waxay noqotay dawlad qabiil oo ay diinta Islaamka iyo wadaninnimo ay ka maqan yihiin.
Dawladda ku meel gaarka ah waxaa lagu dhisay saldhig qabiil. Xubnaha baarlamaanka waxaa soo magacaabay qabiilkooda, Ra’iisul wasaarahana waxaa lagu soo magacaabay habkaas. Ra’iisulwasaaruhuna wasiirrada dawladdiisa oo dhan 27 wasiir (iyo 4 aan weli la shaacin) wuxuu ku soo xulay hab qabiil. Middaas waxay muujinaysaa si aan shaki ku jirin sarreynta uu qabiilku ku sarreeyo bulshada Soomaalida. Waqti baa jirtay u doodidda sarreynta qabiilka lagu cambaarayn lahaa magic waddaninnimo iyo mi diineedba. Maantase, qabiilku waa cumlad uu sarrifkeedu ka sarreeyo mabaadi’da kale oo dhan. Jagooyinka iyo mas’uuliyadda dawladda waxaa lagu qaybiyaa asaas qabiil; qofka tayadiisa qiima weyn ma laha.
Waa billaw xun; laakiin waa billaw. Dawlad qaran oo lagu dhisay qiima qabiil meelna gaari meyso haddii aanay siin taageero buuxda qabaa’ilka oo dhan iyo kooxa hubaysan. Inta waxaa dheer waa in loo arkaa inay tahay tillaabo ku meel gaar ah oo aan soo noqon doonin mustaqbalka. Waajib baa ka saran siyaasiyiinta iyo bulshada madaniga ah oo is wata in dastuurka ku meel gaarka ah la beddelo si baarlamaannada iyo dawladaha Soomaaliyeed ee mustaqbalka la samayn doono lagu soo doorto nidaamka ah HAL-QOF-HAL-COD, qabiilkuna uusan dawr ka cayaarin. Isbeddelka caynkaas ah waa inuu ku yimaadaa wadahadal siyaasadeed gudaha iyo dibedda baarlamaanka.
Inta ka horreysa, waa in dawladda lagu taageeraa sidii ay waddanka ugu soo celin lahayd nabadgelyo iyo awoodda sharciga. Arrin sahlan ma aha in si nabadgelyo leh hubka looga dhigo kooxaha hubaysan oo loo sameeyo maamullo goboleed, loona dhiso hay’adaihii dawladda waddankana loo diyaariyo doorasho xor iyo xaq ah. Hoggaamiyayaasha kooxaha hubaysan marakan waxay ka tirsan yihiin baarlamaanka ku meel gaarka ah, qaarkoodna dawladdeyba ku jiraan. Dhib weyn kuma ay aha, haddii ay doonaan, inay ciidankooda hubka ka dhigaan. Haddii ay diidaan inay sidaas yeelaan, waxay u muuqanaynaa inay minja xaabinayaan dawladda.
Waa lagama maarmaan in dawladdu ay u aaddo Soomaaliya sida ugu dhakhsaha badan, iyadoon u aaba yeelin amni darrida jirta. Fadhiga dawladdu waa Muqdisho, haddii uusan barlamaanku gaarin go’aan kale. Haddii ay sii joogto Nairobi, waxay u muuqanaysaa dawlad dibed-joog ah waxayna beeleysaa qiimihi ay u lahayd Soomaaliya. Waa mas’uuliyad saran hoggaamiye-kooxeedyada inay ka shaqeeyaan sidii ay nabadgelyo ugu soo celin lahaayeen magaalada Muqdisho haddii ay doonayaan inay magaaldu noqoto magaalomadaxda qaranka. Waa inay qaadaan caqabadaha hor taagan in sharci iyo kala dambeyn lagu soo celiyo waddanka. Haddii ayan middaas yeelin, waxaa soo bixi doona codad ku andacooda in magaalomadaxda loo raro meel kale oo waddanka ka mid ah oo nabadgelyo ka jirto.
Muddada gaaban, beesha caalamku Soomaaliya way u fidin doontaa taageero dhaqaale iyo farsamo; laakiin muddada dhexe iyo midda dheerba waa in uu waddanku isku taago lugihiisa. Beesha caalamku waddan burburay dib uma dhisto haddii ayan jirin wax ku kallifa. Awoodyada adduunka ka jira waxay u gurmadaan waddammada dhibaatadoodu ay wax u dhimayso nabadgelyada iyo xasiloonida waddammada deriska ah. Dhibaatada Soomaaliya waxaa loo arkay inay tahay mid ku kooban Soomaaliya oo keli oo aan raad xun ku yeelan Karin xasilloonida dawladaha deriska la ah. Sidaas daraaddeed, ma jiraan wax caalamka ku khasbaya inay dib u dhisaan Soomaaliya. Sidii xamaasad li’ida ahayd ee loola dhaqmay dalabkii dawladdu ay ku dalbatay ciidammo shisheeye waxay ka mid tahay sida loo arka dhibaatada Soomaaliya guud ahaan.
Hoggaamiyayaasha cusub ee Soomaaliya waa inay fahmaan in xiriirka dawliga ahi uu dhisan yahay danaha qaranka oo uusan inta badan lahayn dhinac akhlaaqeed. Soomaaliya waa waddan tabar daran, mustaqbalkiisana waxaa agaasimaya shisheeye danahooda qarameed wata. Sidaasi waa sida u dambeysa dawladaha tabarta daran oo burburay.
Dawlado badan oo Itoobiya ay ugu horreyso ayaa lagu eedeeyaa dhibaatada Soomaaliya. Dawladahaasu waxay Soomaaliya gacmaha kula jireen waqtigii uu adduunka intiisa kale iska indhatirayay dhibaatada Soomaaliya. Dawladahanu wanaag jacayl kama ahayn falkoodaas ee waxay dabajoogeen danahooda. Hoggamiyeyaasha siyasadeed ee Soomaaliya waa inay arkaan xaqiiqada mesha taalla oo ay ula macaamiltamaan si xikmad leh oo Soomaaliya wanaag u keenaysa ama dhib ka hor istaageysa.
Awoodda Itoobiya ay ku haysato gobolkaas oo dhan wuxuu ka soo jeedaa tabardarrida Soomaaliya, tan dambe oo weligeed ahayd awoodda ka soo horjeedday dhulballarsiga Itoobiya mar walbana dheelli tiri jirtay awoodda Itooboya. Isbeddelka ku dhacay siyaasadda addunka, oo uu riixayo waxa lagu magacaabay la dagaallanka argagixiska Islaamka, ayaa siiyay Itoobay marmarsiinyihii ay u baahnayd inay faraha la gasho arrimaha Soomaaliya oo ay agaasinto mustaqbalkiisa. Maanta waxaa Itoobiya lagu eedeynayaa inay lug ku leedahay magacaabidda wasiirrada dawladda cusub ee Soomaaliya. Maqnaanshaha ay diinta iyo waddaninnimadu ay meesha ka maqanyihiin ma aha kamma ee waa ula kac. Waxaa loo arkay in ayan la socon karin wadciga cusub ee addunku ku sugan yahay.
Xiriirka Itoobiya waa in lagu maamulaa xikmad iyo waaqica maanta lagu jiro si loo ilaaliyo maslaxadda weyn ee qaranka. Way adkaanaysaa in Soomaaliya dib la isugu keeno haddii ay kala jiidayaan dawladaha deriska la ah oo ay ugu horreyso Itoobiya. Dawladaha deriska ah dan baa ugu jirta in la helo dawlad Soomaaliyeed oo nabadgelyo waddankeeda ku soo celisa. Mashruuca dib u dhiska Soomaaliya waxaa laga yaabaa inuu waqti gaaban qaato haddii ay dawladaha lugta haya ay siidaayaan oo faraha kala baxaan.
Ugu dambeynti, Soomaaliya waxay u baahan tahay taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Dawladda cusub waa inay taageeradaas ka raadisaa beesha caalamka. Qof kasta oo Soomaali ahna waa inuu noqdaa danjire u maqan Soomaaliya oo u sameeya “lobby” taagero raadis ah. Soomaaliya mustaqbal bidhaamaya ayay leedahay haddii ay hesho dad ehel u ah oo sameeya.